ကျွန်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရာလေးတစ်ခုလောက် ရှိစေချင်တယ် … – Shinyoon
ကျွန်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရာလေးတစ်ခုလောက် ရှိစေချင်တယ် …
Social Media တဲ့ အရမ်းစွဲလမ်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ဘူး ရူးလဲမရူးသွပ်သလို ရင်ဘတ်ထဲရှိနေရုံနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးနေလို့ရပေမယ့်လဲ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတစ်ခု သူ့Wall ပေါ်မှာရှိစေချင်တယ် ….
ဘာကြောင့်လဲတဲ့ … အနည်းဆုံးတော့ သူအလေးထားပါလားဆိုတဲ့ ကြည်နူးမှုလေးကိုယ့်အတွက်ရှိစေချင်ရုံလောက်ပါ … ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတော့ ကိုယ့်အတွက်ဆိုပြီးနေရာတွေမရှိခဲ့ဘူး ….ကိုယ့်အတွက်ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာ တစ်ခုမှ ရှိမနေခဲ့ဘူး
ဝမ်းနည်းမိတယ် မဟုတ်ဘူး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရုံပါ … တစ်ခုခုဆို ကိုယ့်ဘက်ကပဲ အဖြစ်သည်းနေသလားတွေးမိလာတဲ့အထိ ကျွန်မ စိတ်မကောင်းဖြစ်တတ်တယ် … သူရဲ့ Personal တွေကို ကိုယ် ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်နေခြင်းမရှိပေမယ့် ကျွန်မက သူ့ရဲ့ချစ်သူပါဆိုတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုတော့ရှိချင်မိတယ်
ကိုယ့် MyDay မှာ ကိုယ့် Status မှာ … သူဆိုတာ အမြဲတမ်းရှိခဲ့ပေမယ့်လဲ သူ့အတွက်ကျတော့ ကိုယ်ဟာ ဘယ်နေရာမှာမှ ရှိမနေခဲ့ဘူးလေ … ရင်နာနာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင် ရှိမနေခဲ့ပါဘူး …အခွင့်ရှိခဲ့ရင် ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရာလေးတစ်ခုလောက် ရှိစေချင်မိတယ် ကိုယ် တွေ့ချင်နေမိတယ် …
ကြ်န္မနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အရာေလးတစ္ခုေလာက္ ရွိေစခ်င္တယ္ …
Social Media တဲ့ အရမ္းစြဲလမ္းေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး ရူးလဲမရူးသြပ္သလို ရင္ဘတ္ထဲရွိေနရံုနဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုျပီးေနလုိ့ရေပမယ့္လဲ တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ ကိုယ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့အရာေလးတစ္ခု သူ့Wall ေပၚမွာရွိေစခ်င္တယ္ ….
ဘာေၾကာင့္လဲတဲ့ … အနည္းဆုံးေတာ့ သူအေလးထားပါလားဆုိတဲ့ ၾကည္နူးမႈေလးကိုယ့္အတြက္ရွိေစခ်င္ရံုေလာက္ပါ … ဒီေန့ဒီခ်ိန္ထိေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ဆိုျပီးေနရာေတြမရွိခဲ့ဘူး ….ကိုယ့္အတြက္ဆိုျပီး ရည္ရြယ္ထားတဲ့အရာ တစ္ခုမွ ရွိမေနခဲ့ဘူး
၀မ္းနည္းမိတယ္ မဟုတ္ဘူး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိရံုပါ … တစ္ခုခုဆို ကိုယ့္ဘက္ကပဲ အျဖစ္သည္းေနသလားေတြးမိလာတဲ့အထိ ကြ်န္မ စိတ္မေကာင္းျဖစ္တတ္တယ္ … သူရဲ႕ Personal ေတြကို ကိုယ္ ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္ေနျခင္းမရွိေပမယ့္ ကြ်န္မက သူ့ရဲ႕ခ်စ္သူပါဆိုတဲ့ ေနရာေလးတစ္ခုေတာ့ရွိခ်င္မိတယ္
ကိုယ့္ MyDay မွာ ကိုယ့္ Status မွာ … သူဆိုတာ အျမဲတမ္းရွိခဲ့ေပမယ့္လဲ သူ့အတြက္က်ေတာ့ ကိုယ္ဟာ ဘယ္ေနရာမွာမွ ရွိမေနခဲ့ဘူးေလ … ရင္နာနာနဲ့ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္နဲ႕ပတ္သက္ျပီးေတာင္ ရွိမေနခဲ့ပါဘူး …အခြင့္ရွိခဲ့ရင္ ကိုယ္နဲ့ပတ္သက္တဲ့ အရာေလးတစ္ခုေလာက္ ရွိေစခ်င္မိတယ္ ကို္ယ္ ေတြ့ခ်င္ေနမိတယ္ …
ကျွန်မအတွက် ကံပဲကောင်းမနေခဲ့တာလား ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မပဲ မကောင်းတာလား